Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment किन बढ्छ महिलाको हिप ? - Pnpkhabar.com
किन बढ्छ महिलाको हिप ?
विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बद्लिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ ? उनीहरुको हिप किन फुल्छ ? प्राय केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा नै यहि हो ।
यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो । एजेन्सी